Xaqa ka ugu qaalisan kiniiniyada Android inay telefoonka mobile jaban (in ilaa ay leedahay OS Android ah), dabacsanaan ku saabsan qalabka Android Soha oo kalimo ugu xumaa oo loo eegin sababta aad u iibsigu qalab, waxaad tahay marnaba isticmaalka kaliya qalab Android aad qiimaha buuxa haddii aad u isticmaasho sida ugu fiican ee suuqa Android aad (marka laga reebo haddii aad naftaada iibsaday oo kaliya in ay wacaan oo i rumaysta, taasi waa dhif, barnaamijyadooda kuwa kaliya aad u Yeedha).
Suuqa Android imtixaan si sax ah, waxa ay leedahay kumanaan ka helay ee Chine weyn. Statistics diiwaanka ka badan 600,000 oo Chine Android horumariyo (labada bixiyo oo lacag la'aan ah) oo la rogid ka badan saacad kasta, taasoo ka dhigeysa mid ka yaabban oo si sax ah dejisan iyo kuwa aan u qalantaa. Halkan caawimaad yar, sababtoo ah Android ka dhigaysa wax walba si sahlan laakiin liiskan ka dhigi doonaa waxa inta badan ka sahlan sidii aad ku talinaysaa 10-ka sare barnaamijyadooda Android bixiyo oo lacag la'aan ah si ay u soo bixi in aad siin kartaa mid aad u dheregto, madadaalo ka buuxo, oo daqiiqado kaamil ah; Dalka Chine in ay kaa hayo marti qaaday, horseedaya aad cajiib hoose u ogaado dheeraad ah oo rasmi ah, waxaad siinaysaa shaqada wacan.
Kuwaas oo ah nooc Chine ayaa si gaar ah u ahayd oo si taxadar leh loo doortay iyo wax badan oo ka ka kooban oo ka mid ah qaababka la isku daray ee Chine badan si ay idiinka samatabbixin waxyaabahan ka mid xirmo. Had iyo fulinta hawl-maalmeedka shiidaa oo dhan waxa ay noqon xafiiska Waxay kugu dhawri doonaa mashquul, guriga, xarunta jimicsiga, meel kasta oo ay suurtagal tahay. Talooyinka Tani ayaa rajeynaya inuu daboolo category ku dhowaad dhammaan loo baahan yahay si jiro wax la waayay ama ay soo tagay ka. Waxa kale oo ay kaa caawin doontaa bedelka qayb ahaan marka PC waa ka fog gaari karin. Dareen xog la xuso waxaa laga yaabaa in sida liiskan geliya sida mudnaanta.
Qaybta 1. Top 10 Android Apps Free Download
Qaybtan, waxaan doonayaa inaan u muujisid in aad 10 barnaamijyadooda Android oo lacag la'aan ah. Just eegno waxa at. Waxaa laga yaabaa in ay tahay waxa aad doonayso.
IFTTT 6.30 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifttt.ifttt&hl=en 4.2 4.0
ES File Manager File Expolrer 4.20 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=en 4.6 2.1
Nova Launcher 4.1 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=en 4.6 4.0
Kingsoft Office FREE + PDF 27 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=en 4.4 2.2
PicsArt Photo Studio 14,41 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=en 4.5 VWD
Avast Mobile Security 7,98 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&hl=en 4.4 VWD
SwiftKey 26,06 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=en 4.6 2.2+
WhatsApp Rasuulka 14,57 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=en 4.4 2.1+
Master Nadiif ah 9,38 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=en 4.7 VWD
Hoomboro Browser 7.25 FREE https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.mgeek.TunnyBrowser&hl=en 4.6 VWD
IFTTT (Haddii Tani waxay markaas), waa adeeg ah in asal ahaan kuu ogolaanayaa inaad la abuuro xiriir la isticmaalayo statements shuruud fudud. Waxa ay ku bilaabatay sida codsiga internet-ka ee 2010-ka ayaa haatan waxa uu leeyahay version ah android ay update ugu dambeeyay ayaa dhawaan soo saartay July ee sanadkan. Its hordhac suuqa android sida la filayo ayaa jadwalka ku fududaatay xiriir kala duwan la heli karaa channels oo ay taageerayaan adeegga.
IFTTT isku xira codsiyada sida caadiga ah loo yaqaan channels la channel kasta isagoo kiciya iyo tallaabooyinka gaarka ah. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala cuntada la abuuro in ka caawisaa adeegyada kasta oo kale oo la xiriiraan.
Adeeggu wuxuu hadda ka kooban yihiin in ka badan 116 channels muuqan dhamaan adeegyada bulshada oo caan ah (oo ay ku jiraan facebook, twitter iyo kooxaha ka). Waxaa kaliya ee aan ku xaddidnayn adeegyada bulshada, laakiin sidoo kale taageertaa adeegyada la wadaago oo caan ah (sida WordPress, Instagram, lala-In, iwm) iyo adeegyada kala duwan ee Google.
differentaited 5-star in ka badan 600,000 oo daawadayaasha iyo isagoo la soo bixi in ka badan 800,000 oo dadka isticmaala; ES Explorer sameeyaa wax ka badan bixinaya muuqaalada ku rajo weyn Tababaraha file ah; waxa uu inta badan loo arkaa dhan-in-ka mid ah iyo hawlihiisa la kulmay ay ka filanayaa.
Waxa uu leeyahay ee loo dhisay text daawadayaasha / tifaftirayaasha iyo ciyaartoyda u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u maareeyaan khayraadka si xor ah oon Mushrikiin la sawiro, video, music, waraaqaha, faylasha, iwm Waxaa sidoo kale waa wax fudud in geliyaan sawiro, files share la aaladaha kale ee Android via Wi -Fi.
Files Maareynta ayaa helay wax badan ka sahlan sida ay u isticmaalaan guryaha la midka ah ee kombiyuutar jidaynayey isticmaala inay Multi-dooro, nuqul, cut, koollada, soo dir, iyo wixii la mid ah iyo qalab ay maamulka file gaar ah ku siin kara helitaanka nidaamka file dhan iyo oo dhan diiwaanka macluumaadka. Its dambeeyay version share oo u furan in menu browser uu furmo suuqa internetka iyo sidoo kale taageertaa login isticmaalaya file muhiimka ah ee sftp.
Marka ay timaado in shaqsinimo, launcher Nova ayaa doorashada ugu sareysa inta badan isticmaala android. Iyada oo ay u saftay soo jiidasho leh, waa in aad bixisaa load ka mid ah qaababka sahlan loo astaysto iyo gacan ku haynta; spicing ilaa aad waayo-aragnimo Android oo la siiyo qalab Android aad eegtid cusub.
Launcher Nova saamaxaya kuwa isticmaala in ay ku darto theme cusub u sameeyaan goobaha Nova iyo bedeli hufnaan soo jeeda. Users sidoo kale qabsato karaa tirada walxood oo laga heli karaa bogga dekedda ka soo goobaha dekedda iyo kordhiyo tirada Chine ay khaanadda bixinta ilaa 16 column in ay aragtida sawirka.
Waxayna u shaqaysaa iyadoo versions of Android 4.0 iyo wixii ka sareeya oo ay u egtahay wanaagsan looxyo sida ay tahay ee casriga ah.
Dadka ku farxayaa in ay hawlaha rasmiga ah iyo ganacsiga, Kingsoft; app ah qoraalka tafatirka dabacsan, inta badan waa qalab aad waxtar leh. Tani fudud Suite Office Mobile leeyahay sii daayo dambeeyay July 2014 ay soo muuqan "tirada ereyada" cusub, tuubada alaabta ay u arkaan in ay ka buuxaan filter xogta shaashadda si ay u muujiyaan tirada tallaabadaas diiwaanka ee barasantigareeyaan ay.
Kingsoft bixisaa qaababka ay ka buuxaan XAFIISKA mobile jidaynayey users arkaan, la abuuro, badbaadin iyo sidoo kale wadaagaan files DOCX, TXT, XLSX iyo PPTX on qalabka ay Android. Tilmaamo Gaar oo dhawaan ku daray waxaa ka mid ah ay qoraa, isbiriidhshiit, soo bandhigidda iyo PDF ee Android.
Ka dhigayaa suurto gal ah in la furo lifaaqa oo si toos ah lifaaqa diro ka dib markii beddelid Integration codsiga boostada. Cloud adeega kaydinta taageero la maamuuska WebDAV sidoo kale waxaa laga heli karaa la update ka badan weli diidanaa in sida yaboohay.
Isagoo aan aheyn artist ah, waxa suuragal ah in ay oodda-abuurka hoose u sameynaya farshaxanka laga cabsado oo isticmaalaya PicsArt in-dhisay saamayn wayn. PicsArt waa sawir-habaynta iyo sawir aalad awood free kuu oggolaanaysa in aad buuxin riyada artist run ah.
Its guryaha qoto-dheer ka kooban ah "qalab barbaro", iyadoo burush farshaxanka iyo lakab si ay u abuuraan images mobile, hab DrawCam kaas oo u ogolaanaya isku-waqtiga dhabta ah sawir qaadashada leh sawir, tafatirka iyo layers; oo ah "Social Network" kaas oo kuu ogolaanaya in aad la wadaagto dadka kale ee aad images ..
PicsArt waa mid fudud oo user-friendly, iyo sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala login Facebook, Google lagu daray, twitter account ama PicsArt si uu ugu biiro users kale ee bulshada PicsArt ah.
Avast! Ammaanka Mobile
OS Android ayaa laga yaabaa in u muuqdaan kuwo ay adag tahay in khawano laakiin ay xawaaraha ku dhiirigelinayaan, taasoo ka dhigeysa waxa galmo ma talinayaa. Waxaa jira wax badan oo Android barnaamijyadooda Anti-virus in aad bixisaa ilaalinta ugu badan sidaas ma avast! Ammaanka Mobile ilaalin dhamaystiran ka dhanka ah spyware, furin, iyo fayras sida Trojans. Waxa ka sii badan intii ka xanibeen Anonymous ay ku daray firewalls in aad qalab laakiin ay Web Shield aad ka digtay mar kasta oo loo siiyaa biraawsarkaaga isku dayo inuu ku shuban wax URLs furin-cudurka.
Avast adda waxay u baahan tahay ugu yaraan Android 2.1 si ay si guul leh u ordaan oo waa iska diyaar ah oo ku saabsan qalabka Android kala duwan. Call iyo filter SMS, iyo khasaaro xogta laga hortagi karaa iyadoo la isticmaalayo shaqo-bixiye iyo feature dhawaan via hago saamaxaya kuwa isticmaala si aad u hesho telefoonada ay Android.
Your keyboard Android hubaal eegi kartaa caqli badan ay default sida loo isticmaala inta badan, inay "SwiftKey", a keyboard cid saddexaad soo jiidasho leh u Android oo beddelaya aad default keyboard android mahad. Mid ka mid ah qaababka ay caan ah waa ay autocorrect iyo guryaha saadaasha socda-hadalka ka fursadaha afka kala duwan uu ka soo xusho. Waxaad ku shuqloonyihiin Nicmo lahaa talooyin ay maanka ku-akhriska hadalka sida badan waxay ka haraan si ay u bartaan aad ka sida aad ku qor.
Shaqsinimo ayaa si weyn u soo hagaagtay sidii users waxaa loo ogol yahay in ay u astaysto ay keyboard muuqataa by mawduucyada lagala soo dukaanka SwiftKey ama tweak, kala, resize ee undock aad keyboard in kasta oo meel ku haboon ee aad shaashadda. Sidaas, hadda aad u dhig yaabaa gacmahaaga fiican iyo nooca dheereysa oo sahlan.
WhatsApp Rasuulka waa adeegyada fariimaha deg dega ah oo caan ah ayaa haatan loo isticmaalo malaayiin dad ah in ay is dhaafsadaan fariimaha si xor ah ku casriga ah iyadoo la isticmaalayo Wi-Fi ama adeegyada network mobile. Waxa aan ku xaddidnayn qoraal fariimaha keliya, laakiin waxay kuu ogolaanayaa inaad si ay ula kale users WhatsApp iyo baraha warbaahinta bulshada ee kala duwan sawiro / sawirada, codka iyo video fariimaha.
WhatsApp ku rakibtay qalab ku leh ugu yar ee Android OS 2.1 iyo waxa la jaan qaada casriga ah ugu. Waxa ay u ogolaataa chat group oo lacag la'aan ah ma eedeeyay caalamiga ah. Soo gal oo ku daray ah asxaabta waa arrin sahlan sida aad qabto oo kaliya in ay gasho adiga oo isticmaalaya lambarka mobile (hubinta aad leedahay qorshe SMS ah) oo si joogto ah baadhaa iyada oo buugga cinwaan u isticmaala diiwaangashan. Waxaa kale oo u oggolaanaysa in shaqsinimo sida ku siin kartaa derbiga eegno cusub doorataa wallpaper in aad chat menu, ka dibna doorashada ka boqolaal fursadaha wallpaper laga heli karaa WhatsApp ama la isticmaalayo sawir ka nidaamka faylka.
Waxaa jira had iyo jeer hab ay marka aad Android u muuqataa si gaabis ah oo niyad-jab ay sabab u kaydinta yar ama hawlaha xad-dhaaf ah loading ee asalka. Sayidkiisa nadiifi si fudud iskaan karaa iyada oo qalab u junks.
Master nadiif ah waa optimizer ah Android in asal ahaan laba wax sameeya; lafaguraa xasuusta qalab aad si ay u soo saarto faylasha junk abuuray by codsiyada, waxa kale oo uu leeyahay dilaaga ah ee loo dhisay hawsha in ay is ogow of geeddi aan loo baahnayn in la laga yaabaa in asalka socda oon hagaajinta xawaaraha iyo hagaajinaysa xasuusta telefoonada '.
Xagga sare, wax kale oo kale, waxaa laga yaabaa in ay nadiifiso call iyo taariikhda browser labadaba. Waxa kale oo aad isticmaali karto si ay ula socdaan in aad codsatid.
Halleeyo lillaahinimada hoomboro ee browser ee wax yaabahan gaar ah ayaa waxaa sumcad helaan marka la barbar dhigo kale magac weyn browser; weli waxa aad bixisaa wax walba browser u baahan yahay. Taasi waa in qeyb ka bedelka ugu aaladaha Android daalacashada default ay doorashada. Taasi karin ayaa dhan; waxa kale oo ka mid ah daalacashada Android yar isticmaala ciyaaryahan flash Adobe si daawashada cajaladaha on Youtube iyo goobaha kale ee la mid ah warbaahinta ayaa waxaa suurtageliyey.
Dulucda, sidebars, SOONAARKA goobidda iyo waji ka hadalka; waxyaabahan ka dhigaysa biraawsarkaaga noole iyo customizations fudud. Hadda waxaad abuuri kartaa tilmaam barbaro (calaamad) si gaar ah loogu websites aad jeceshahay, raadin iyada oo internetka cod isticmaalaya hoomboro SOONAARKA raadinta, waxayna ku xiraan ama xiriir la wadaago saaxiibo dhow la isticmaalayo Wi-Fi. Waxa si fudud ayaa wax walba oo aad u baahan tahay si ay u gaaraan marka ka eegay internetka.
TOBAN TOP (10) APPS BIXIN
Qaybtan waxa kale oo uu muujinayaa barnaamijyadooda mushaarka gaar ah hore u la barbar dhigo oo la soo xulay oo ku saabsan dabacsanaan iyo waafaqid. Dhinacyada la barnaamijyadooda ku qoran ayaa sidoo kale fursad kale oo lacag la'aan ah oo ku filan lahaa xaaladaha arrimaha gadashada ama waafaqsan.
Qaar ka mid ah barnaamijyadooda, kuwaas oo kasoo muuqday versions free sidaas daraaddeed users waxaa lagula talinayaa in ay isku dayaan ka hor iibsiga gaar ahaan kuwa waafaqsan kala duwan yahay qalabka. Ayaa tirada la wareegay yihiin ugu badnaan si qalab kale waa in u baahan tahay isku mid ah ama ka yar.
Qalabka SoundHound (∞) 9,63 5,99 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier&hl=en 4.5 VWD Shazam, musiXmatch
Boorsooyinka 2.23 4,04 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=en 4.6 VWD AutomateIt
Pro Runtastic 22,24 5,63 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.pro2&hl=en 4.6 VWD RunKeeper
MX Pro Player 8,01 5,83 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.pro&hl=en 4.7 2.1 VLC
Nova Launcher Ra'iisul 4.17 4.00 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher.prime&hl=en 4.8 4.0 Google Launcher, C Launcher
Pocket Dhisa 4.2 3.75 https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.shiftyjelly.pocketcasts&hl=en 4.6 4.0+ Podcast Republic, Stitcher
Moon + Reader 7.20 4,99 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreaderp&hl=en 4.7 2.2 Reader Cool
Pro Calendar Business 3.1 5,40 https://play.google.com/store/apps/details?id=mikado.bizcalpro 4.6 2.0.1+ Google Calendar
OfficeSuite 7 Pro 32,31 14,99 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.editor.office_registered 4.3 2.2 Xafiiska Quick, Kingsoft
VWD: duwan Iyadoo Device
SoundHound qalabka (sida caadiga ah ku qoran sida SoundHound ∞) u fuliyaan badan oo shaqo laakiin ay diiradda ugu weyn waa in ay baadhaan songs aqoonsanaya dhawaaqa hummed. Sidaas oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa Hum ama u galay gabyaan oo kaliya tuubada kaliya ku button SoundHound ∞, waxaa isla markiiba baadhaa oo cadeeynaya song lyrics iyo; halkaas ka aad sahamin karaan fursado kale - share, iibsadaan.
Tan iyo markii la bilaabay sidii adeeg mobile, song raadinta ayaa helay wax badan ka sahlan. Sida ay bixisaa fursado kala duwan si ay u baadhaan heeso, aad si dhib leh ku leeyihiin in ay madaxa aad xagan ka hor inta aadan xusuusan karin magacyada artist. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa nooca, Hum ama gabyi oo isku dayda in ay waafaqayaan talooyin la isticmaalayo "Sound2Sound" technology.
Helitaanka LiveLyrics ka dhigayaa suurto gal ah in uu soo bandhigo laga heli karaa song lyrics in waqti la music ah. Sidaas double-siyoodba on lyrics ay u dejisay in isla hal dhibic oo ay la socdaan music la ciyaaray. Sida version premium ah, SoundHound ∞ waxaa laga heli karaa PlayStore u $5.99. A app dhow oo lacag la'aan ah kuwaas oo bixin kara hawlaha la mid ah oo suurto gal bixiyaan qaar ka mid ah muuqaalada kala duwan waa Shazam halka musiXmatch ayaa sidoo kale ku filan ayaa laga yaabaa in mararka qaarkood
Tasker, sida magaca codadka qalabayn hawl hoos macno gaar ah. Tusaale ahaan waxa aad dhisan kartaa Tasker in aan bilowno app gaar ah (taasi oo aad) marka ay si sax ah 8:00 PM (aad la eego). Sidaas muddo fudud, waa ay fududahay in ay qaataan macnaha guud sida "shuruudo" kaas oo loo xilsaaray hawlaha yihiin iswada u fulinta. Tasker "macnaha" in la ogaado, oo aan kaliya ku koobnayn dhigay markii; macnaha guud ayaa laga yaabaa gaar ah goobta, codsiga, waqtiga, taariikhda, meesha, haddii ay dhacdo ama farta. Mid ka mid Sidaas "abuurto profile" kartaa adigoo automating hawl hoos macno ah.
Isticmaalka Tasker u Android waa wax fudud marka aad la fahmo fikradda iyo baro sida loo isticmaalo macnaha guud. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa taariikhda kooban ee hawlaha kala duwan halkaas oo hawsha la iswada haddii hawsha hore waa run. Taxane ah oo hawsha u abuurray Insaanka ee la heli karo download si xor ah ku shabaqa. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa nuqul aad download galay aad tasker profile. Wax la mid ah in sidoo kale la qaban karo by qalab waxaa ka mid ah beddelka goobaha telefoonka, abuurista ee widget guriga, samaynta fariin SMS fasax, iwm Tasker waxaa heli kara $4.07 iyo app ugu haboon in la bixin karo waa AutomateIt. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in ay user in qalabayn hawlaha iyo falalka. Qaar ka mid kale oo la mid ah Chine oo lacag la'aan ah ka heli kartaa qaar ka mid ah gaar ahaan ka maqan calaamado muhiim ah.
PRO Runtastic waa codsi Android in la rumaysan caawisaa ujeedooyin caafimaadka iyo jir dhiska, Runtii waa mid yaab sida in la sameeyo suurtagal ah. Hawlaha taam app kuwan raadkaygay (sida socda jugging, u socda) oo isticmaalaya farsamada GPS. Waxaa hoos u dhigan horumarka - time, masaafada, calories, iwm, si ay u caawiyaan hanashada himilooyinka caafimaad iyo jimicsi. Iyadoo technology GPS, PRO Runtastic taageeraa tababarka-waqtiga dhabta ah, statistics LIVE iyo goobta la wadaago, oo sameeya auto-hakin mar kasta oo aad joojiso.
The app aadka loo qiimeeyo waa madadaalo ka badan si ay u isticmaalaan sida dadka isticmaala ku raaxaysan karaan music via ciyaartoyda music dhafan ama ilo kale music (SoundColud, Pandora, iwm). Waxa kale oo aad dhaqaajiso karaa cod amarka, socodsiinayaa audio iyo wadaagaan hawlaha jirdhiska ku shabakadaha bulshada. Tracker A jimicsi la mid ah oo bixiya qanacsanaanta siman oo suurto gal ah qaar ka mid ah muuqaalada kale ee gaarka ah ee gaar ah ay RunKeeper (app free), waxaa laga heli karaa Play Store.
Siidi magaca waa ciyaaryahan laakiin waa ka sii badan intii in; comments on top qiimeeyo app warbaahinta ayaa had iyo jeer isku mid ah - MX Player PRO ciyaara wax kasta, qaabab oo dhan, in hubaal waa in ku lug lahaayeen laakiin aan ku xaddidnayn, ay caan iyo rating sare. Waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan kuu oggolaadaan in aad mari kor / hoos iyo xaq / tagay si ay u beddelaan mugga, nuurka iyo booska uu ka ciyaaray.
Performance ayaa si weyn loo kordhiyay iyada oo kelmadaha; kelmadaha multi-xudunta u gacan qaab qalab dual-muhiimka ah iyo dardargelinta hardware caawisaa videos ciyaari macaan. Kids qufulka ka hortagtaa taabashada shil halka daawashada iyo update dhawaan ka dhacay June, 2014 go'an badan oo shilalka iyo dhibaatooyin maqal ah. MX lagu yaqaan ay dabacsanaan - awooddiisa ah inuu ciyaaro qaabab badan oo noqon kara kulan oo kaliya VLC (ciyaaryahan kale oo lacag la'aan ah warbaahinta Android) in ay sidoo kale taageertaa xawaaraha hardware.
Nova Launcher Ra'iisul
Waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid rido halkaas laakiin kuwa soo dheegato ku qanacsan ba'an ee ka personalizing wixii ay Android ama dhali ku doonayso in ay qaadato shaqsinimo heerka ku xiga, ra'iisul Nova Launcher san yahay doorasho sida ay u siinayaa isticmaala dhamaystiran gacanta ku screen guriga ay .
Muuqaaladan dheeraad ah version sidani oo marka la barbar dhigo ay free version oo laftiisa waa app cabsi badan ka farxiya badan. Dhaqdhaqaajinta jirka iyo icon karaka - yaabtid, dadban, double-tuubada; awoodda ay u dhigay ficillada caadadii, rogto saamaynta - tirtiri iyo tuuro hayaa xiiso leh oo ku socda. Nova Launcher waa in marka hore lagu xiraa sida version sidani oo kaliya muuqaalada dheeraad ah oo ay la socdaan kuwa kor ku xusan.
Ra'iisul Nova Launcher lagu iibsan karo PlayStore u $ 4.00 laakiin kuwa ku qanacsanayn shaqsinimo lacag la'aan ah, ka dibna Google Launcher ama version xorta ah ee launcher Nova caadi ahaan waa.
PicSay Pro kuu oggolaanayaa in aad wax ka bedel iyo shakhsiyeeyo photos iyo sanamyadiinna la isticmaalayo saamaynta heli karo. Waxaad dooran image ah u sameeyaan adiga tababare gallery ama file iyo PicSay siisaa qalab si aad u shaqeeyaan image soo bandhigay aad shaashadda. Its fududaato in la isticmaalo ayaa waxaa friendlier - Waxaa ku jira qalabka tafatirka aasaasiga ah, ku darayaa qaar ka mid ah ayaa sidoo kale qalab gaar ah (Selective Desaturation iyo Minipiller midabka saamayn), laakiin waxaa ka biyodiiday, ma taageeri processing Dufcaddii.
Waxaa loo baahan yahay in la sii daayo ugu dambeeyay kala duwan la deice (Android OS version iyo qalab brand labadaba) laakiin qalabka socon, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad noqon tilmaamaha horyaalka ee goobaha iyo sidoo kale qaar ka mid ah wuxuu diyaariyaa cayayaanka caadi ah.
PicSay Pro ma aha in la xaddido fanaaniinta 'iyo ujeedadu user sida PicsArt samayn doonaa shaqo equivalently wanaagsan si xor ah.
Jeebka si fudud ku tuura kuu ogolaanaya in aad si aad u dhegaysato iyo sii joogo ilaa taariikhda la podcast ugu dambeeyay. Podcasts jira barnaamijyo laga heli karaa internetka ee taxanahan misana u download ama geeyo kombiyuuterada ama aaladaha mobile sida caadiga ah sida audio, video, PDF ama faylasha ePUB ama qaababka. In muddo fudud, barnaamijyadooda sida jeebka ku tuur abuuraa interface si aad u fudud u maareeyaan iyo dabagal podcast aad jeceshahay; sidaa darteed waxa aad u muhiim ah in la tixgeliyo waa sifooyinka sameeyo jeebka ku eryaa madaxda u gaar ah.
Meelaha in la tixgeliyo - sahal-of-isticmaalka: toggle dhexeeya video audio ay u fiiriyaan content ciyaareed aad, iyo filter dhexeeya doorasho ee dhacdooyin video inuu u ciyaaro, gacanta podcast siyaabo kala duwan: ka widgets, screen qufulka, Bluetooth, iwm
Faylal ay hadda u badan yihiin ammaan. Waafajinta dhaxeeya qalabka Android oo dhan iyo dib-up aad playlist, podcasts iyo mobilada inta ugu badan ee aad u fadlan. Jeebka ku tuur waa wax la jecel yahay iyo kale - Podcast Republic waa arrin qanco seegeen ah feature lahayn.
PRO Moon + Reader
PRO Moon + Reader waa app ah Android asal ahaan u bookworms laakiin aragti shakhsi ah, ee gacanta iyo hawlaha jira xiiso ay u isticmaalaan. Waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah akhristayaasha waxaa laakiin Moon + waxay bixisaa qaar ka mid ah sifooyinka gaar ah tixgalin mudan sida ugu fiican. Its taageero qaab tiro badan yihiin (html, epub, pdf, CBR, cbz, rar iyo wixii la mid ah) waxaad ka heli Dhawa akhristaha wax eBook oo bixiya in qaab badan.
Marka laga reebo in ay faa'iido taageero qaab duwan, Moon + sidoo kale xiiso ay u isticmaalaan sidii ay u saamaxdo saamaynta Iyada oo kala duwan; mawduucyada, baararka horyaalka, hawlaha, iwm, iyo - 3D page-jeestay saamayn ka dhigaysa in ay dareemaan sida book la akhrisanayo adag. Its function eegmo-to-hadli abuuraa shaqo ah reading cabsi badan iyo maktabadda iyo guugta caawisaa urur eBooks fiican. Gacanta Privacy waxaa laga heli karaa via password ilaaliyo ee xawaaladaha iyo wax badan oo dheeraad ah. Its feature waa arrin badan iyo app waa qiimo ku talinaaya.
PRO Calendar Business
Qof walba, ilaa xad gaar ah u baahan yahay heerka is iyo maaraynta waqtiga si aad u wanaagsan u isticmaasho waqti iyo jadwalka. Business PRO Calendar, taariikh dabacsan oo customizable ka dhigaysa maamulka adag fudud. Waxa kaliya ma muujiyaan maalin, toddobaadkii iyo bishii aragti keliya, halkii waxaa ku qeexan jadwalka wakhtiga saxda xilligan in. Tubada taariikh gaar ah oo laba jeer si ay u faahfaahsan macluumaadkaaga ama aad jadwalka. Waxay jeelyihiin in fududahay in la isticmaalo iyo sidoo kale isha ku jadwalka.
Ay u badan tahay in aad rabin in ay sii aragtida caajis isku si u astaysto aragtidaada, widgets iyo xitaa marto, midabada, size font, iwm Waxaad sidoo kale ma lumin aad gudasho la'aanta faahfaahinta sida ay synchronizes la Google. Pro Calendar Business muran la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu iibiyo suuqa Android laakiin kale oo lacag la'aan ah oo bartilmaameed u fudud si siman, jadwalka Google sidoo kale waa doorasho wanaagsan.
OfficeSuite Pro u muuqata in ay la sumcaddii codsiga web dhibtoonaya sida ay u muuqdaan in ay ku xanuunsado oo laba khasaaraha ugu weyn ee asal ahaan ay waafaqsan oo amar ku-app qaababka marka la barbar dhigo tartamaya ay. Habeynta labadan fikradaha uu leexan, waa Suite oo hodan ah oo kaamil ah sidii doorasho. Waxaa la socon kara oo dhan qaabab aasaasiga ah (ZIP, EML, PDF <DIIWAANKA, iwm); oo dhan qaabab Microsoft (DOCX, XLS, XLSM, PPT, PPS, PPSX, PPSM, iwm).
Maamulka File waa wax fudud sida dadka isticmaala had iyo jeer ka heli kartaa helitaanka si degdeg ah u dhawaan, deegaanka, files kaydinta fog iyo sidoo kale la abuuro folder dokumenti. Waxa kale oo ay fududahay in la wadaagaan via daruur, Wi-Fi, Bluetooth iyo e-mail.
Maaraynta, dhoofinta sawirada iyo hawlihiisa Excel ayaa si cad u la casriyeeyay, sidaa badbaadinta iyo tafatirka ee Excel iyo qaabab kale hadda waa suurto gal. Hawlaha cad yahay oo aan xad iyo files yihiin in ka badan ilaaliyo isticmaalaya sirta ah. Its tartamaya Kingsoft bixiya hawlaha limitless sidoo kale oo ay sidoo kale waa doorasho wanaagsan, sida Suite Office ah.
> Resource > Android > Top 20 Free iyo mushaarka Android Apps in Download